မိဘနှစ်ပါးလုံး self –quarantine မိသွားတဲ့အခါ အိမ်မှာ ကလေးတွေ ကျန်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း? - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဧပြီ 18, 2020 Duangrat Wangkledkeaw, M.D.
တကယ်လို့ သူတို့ကိုပါ ကူးစက်သွားမယ်ဆိုရင် အခြေအနေက နည်းနည်းပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့် သူတို့အပါအဝင် မိသားတစ်စုလုံးကို ၁၄ ရက်ခွဲပြီး သီးသန့်နေရတယ်ဆိုတာကို သူတို့ သိနားလည်အောင် မိဘတွေဆီကနေ သင်ယူရမှာပါ။
နောက်တစ်ခုက ကလေးတွေဟာ အမျိုးထဲက အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ (အထူးသဖြင့် အသက် ၇၀ကျော် ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေ)နဲ့လည်း နီးနီးကပ်ကပ် မနေသင့်ပါဘူး။ သူတို့မှာလည်း ကူးစက်ခံရတဲ့ လက္ခဏာတွေ ထွက်ကောင်း ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ Samitivej Virtual Hospital ဆိုတဲ့ Online Application ကနေတစ်ဆင့် ကလေးစိတ်ပညာရှင်တွေ၊ ဆရာဝန်တွေနဲ့ အိုးမကွာအိမ်မကွာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ဒီ ခက်ခဲ့တဲ့ကာလကို စိတ်အေးလက်အေး ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်ကို ခက်ခဲတဲ့ ဒီ ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလကြီးမှာ ပိုးရှိသူတွေနဲ့ ထိတွေ့မိခဲ့ပြီး ကူးစက်နိုင်ချေရှိလို့ မိဘနှစ်ပါးလုံး self –quarantine လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သီးခြားခွဲနေရမယ့် အခြေအနေမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရရင် ကလေးတွေကို နားလည်အောင်ဘယ်လိုရှင်းပြကြမလဲ၊ ကိုယ်နဲ့ဝေးနေမယ့်ကာလအတွင်း ကြုံတွေ့ရမယ့် အခြေအနေတွေ ကို သူတို့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးခဲ့ကြမလဲဆိုတာတွေအတွက် အကြံဉာဏ်တစ်ချို့ ပေးချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ၁၄ရက် ခွဲမနေခင် သားတို့မီးတို့ကို သူတို့ နားလည်နိုင်လောက်တဲ့ စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီး သေသေချာချာ သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြပေးရပါမယ်။
မူကြိုနဲ့ မူလတန်းရွယ်ကလေးလေးတွေဆိုရင် ဖေဖေမေမေတို့က သားတို့သမီးတို့ အအေးမိခံရမှာစိုးလို့ ၁၄ ရက် ခွဲနေမှာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြရပါမယ်။ ဒယ်ဒီနဲ့ မာမီဆီကနေ တစ်အိမ်လုံး ဘယ်သူ့ကို မှ​ အအေးမိမကူးစေချင်လို့ ဒီလို ၁၄ ရက် ခွဲနေတာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြရပါမယ်။
ကျောင်းနေရွယ် ဆယ်ကျော်သက် ကလေးတွေဆိုရင်တော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး တိတိကျကျ သေသေချာချာ ရှင်းပြလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ့်မိသားစု နဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအပေါ်မှာ တာဝန်ယူတဲ့ စိတ်နဲ့ ဒီလို ခွဲနေရတာဖြစ်ကြောင်း၊ ကောင်းတဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ အပြုသဘာဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း နားလည်အောင် ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။
အဓိကပြောရမှာကတော့ ဒယ်ဒီနဲ့ မာမီဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး ဖျားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒယ်ဒီတို့ဆီကနေ သူများဆီကို မကူးစက်နိုင်အောင်သာ သီးသန့်ခွဲနေကြတာပါ ဆိုတာ ပြောရပါမယ်။ ၁၄ ရက်ပြည့်ရင် အရင်အတိုင်း တူတူ ပြန်နေကြမယ်။ ဒီကြားထဲ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့ ဘဘတို့ ဒေါ်လေးတို့နဲ့ ခဏ တူတူနေ။ ဒယ်ဒီတို့ကို လွမ်းလို့ရှိရင် ဗီဒီယိုကောလ်ပြောတမ်းကစားကြမယ် စသည်ဖြင့် ချော့ချော့မော့မော့ နဲ့ နားဝင်အောင် ရှင်းပြရပါမယ်။
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ အပြုအမူကိုလည်း သတိထားရပါမယ်။ ကိုယ်တိုင်က စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့ပုံ၊ ငိုချင်နေတဲ့ပုံ မဖြစ်အောင် နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုခဏခွဲနေလိုက်တာဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်ခံထားဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ရှည်ဖို့လည်းလိုသလို တစ်ချို့အခြေအနေတွေကို သည်းညည်းခံနိုင်ရပါမယ်။ တစ်ချို့ ကိုယ်လုပ်ချင်နေတာလေးတွေကိုလည်း အခြေအနေအရ စွန့်လွှတ်သင့်ရင် စွန့်လွှတ်ထားခဲ့ဖို့ သတ္တိရှိရပါမယ်။ လူတိုင်းကတော့ သားလေး သမီးလေးတွေနဲ့ ဘယ်ခွဲချင်ပါ့မလဲနော်။ သားတို့မီးတို့ကလည်း အတူတူပဲ နေချင်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မတော်တဆ တစ်သက်လုံး မခွဲရဖို့ ခု ခဏ ယာယီ ခွဲနေဖို့လိုတယ်ဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောပေါက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ ခက်ခဲတဲ့ ကာလကို ဖြတ်သန်းဖို့ ခွန်အားတွေ ရှိနေကြဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ကလေးတွေဟာ ဖေဖေမေမေမရှိဘဲ ၁၄ ရက်လောက်ခွဲနေဖို့ဆိုတာ ရပါတယ်။ တခြား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပြီးသွားတဲ့နေ့ကျတော့ အားလုံး ပြန်ဆုံကြပြီး အရင်ကအတိုင်း အတူတူ ပြန်နေကြမှာပေါ့။ ပျော်စရာကြီးပါ။
ဒါပေမယ့် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့ ကလေးတွေမှာ ကြောက်စိတ်တွေဝင်နေမယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြလာမယ်၊ တစ်ယောက်ထဲ ငြိမ်ပြီး ကုပ်နေမယ်၊ ခဏခဏ ငိုမယ်၊ အစာ မစားဘူး၊ အိပ်လဲမအိပ်ဘူး၊ စိတ်တိုနေမယ်၊ တွေ့ရာကောက်ပေါက်နေမယ်၊ ထိန်းရတဲ့ လူကြီးတွေ ကိုင်တွယ်ဖို့ ခက်လာတယ် ဆိုရင်တော့ ကလေးစိတ်ပညာရှင်တို့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ကလေးအထူးကုတို့ စတာတွေနဲ့ တိုင်ပင်ရင် ပိုကောင်းပါမယ်။ သူတို့ကျတော့ မိဘနဲ့ ခွဲနေရလို့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးရဲ့ နည်းနည်းအစွန်းရောက်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုးကို နားလည်တယ်လေ။ ရှင်းပြနိုင်တယ်။ ထိန်းပေးနေတဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို တစ်ဆင့်ချင်း ဘာတွေလုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ် ဆိုတာကို အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် အကြံဉာဏ်တွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရုံကို ကိုယ်တိုင်တောင်လာစရာမလိုဘဲ ဆစ်မီတဝေ့ရဲ့ Virtual Hospital ဆိုတဲ့ online application ကနေတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တွေ၊ ကလေးစိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ အိုးမကွာအိမ်မကွာ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်တွေ ရယူပြီး ခု ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲကာလကြီးကို စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာ သတင်းစကားလေး ပါးလိုက်ချင်ပါတယ်။
မိဘနှစ်ပါးလုံး self –quarantine မိသွားတဲ့အခါ အိမ်မှာ ကလေးတွေ ကျန်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း? တကယ်ကို ခက်ခဲတဲ့ ဒီ ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလကြီးမှာ ပိုးရှိသူတွေနဲ့ ထိတွေ့မိခဲ့ပြီး ကူးစက်နိုင်ချေရှိလို့ မိဘနှစ်ပါးလုံး self –quarantine လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သီးခြားခွဲနေရမယ့် အခြေအနေမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
User rating: 3.52 out of5with 63 ratings